Shacab dalkiisa raba oo ilaashanaya waa sidaas - Latest News Updates
Shacab dalkiisa raba oo ilaashanaya waa sidaas
Waxaa telefoon isoo diray nin ka mid ah asxaabtayda, waxuuna iga codsaday inaan ka caawino dhinaca luuqada Swedishka maadaama uu dalka wakhti gaaban degan yahay. Xalay intii la jiifay ayaa gaarigiisa oo banaanka yaal waxaa ku dhacay gaari kale.
Waxaa jajabay goofanaha hore iyo labada nal ee hore. waxaan u tegey ninkii saaxiibkay ahaa,ka dibna waxaan wacnay saldhiga booliiska si aan ugu sheegno dhibta gaariga gaartay intii la hurday.
Waxaan u sheegnay gaariga lambarkiisa iyo meeshii uu yaalay iyo in aanan garanaynin ciddii wax yeeshay ee ku dhacday gaariga. Booliisku waxaa ay noo sheegeen in la yaqaan gaarigii ku dhacay gaariga saaxibkay maadaama qof arkaayey oo shacab ah uu soo sheegay oo lambarka gaarigii dhibta geystey uu qoray.
Waxaa booliisku noo sheegeen in qiyaastii labadii habeenimo gaariga lagu dhacay, gaarigii dhibta geysteyna uu baxsaday balse lambarkii gaariga ayaa qof arkaayey oo wakhtigaas soo jeedey qoray.Qofkaas ayaa booliiska wacay oo u sheegay kiiska iyo lambarka gaariga cararay.
Booliiskuna ay soo qabteen dareewalkii gaariga. Booliisku nooma sheegin qofka xogta usoo gudbiyey balse waxaa ay dheheen waa sidaas wadaniga rasmiga ahi.
Gaariga dhibta geystey hadda waxaa uu galay laba denbi. 1. waxaa uu ku dhacay gaari meel iska yaal.2. Ka dibna waxaa uu isku deyey inuu dhuunto. Haddaba sida aad aragtasn shacabku isagaa dalkiisa ilaashada, isagaa nidaamka ilaasha, isagaa waxii qaldan soo sheega ilaaliyaha dalku waa shacabkiisa.
Boqolaal ciidan ahi waxba ma qaban karaan haddii aan shacabku la shaqeyn. Dowlad amaan sugi kartaa ma jidho haddii aan shacabku la shaqeyn. Sidaa darteed haddii la rabo in dalka Soomaaliya iyo magaalooyinka soomaaliya nabad ka islaaxdo waa ina shacabku la shaqeeyaan booliiska, ciidanka iyo guud ahaan dowlada. Bal eeg anagoo hurudna ayaa ninkii gaariga nooga dhacay lasoo sheegay .
Qof walba waajib ayaa ka saaran ilaalinta nabada iyo xasiloonida dalka. Haddaan soomaali nahay ma rabno inaan dowlada heer federaal iyo gobolba aan la shaqeyno oo cidda dhibta wada sheegno, balse waxaan jecelnahay inaan dowlada eeda saarno.